गाउँपालिका अध्यक्षले ज्यान मार्ने धम्की दिएको डाक्टरको आरोप
७ मंसिर, रामेछाप । लिखु तामाकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर खड्कालाई स्वास्थ्यकर्मीको ज्यान लिने धम्की दिएको आरोप लागेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष खड्काले टेलिफोन गरी ज्यान लिने धम्कि दिएको आरोप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मन्थलीले लगाएको हो ।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मन्थलीका निमित्त प्रमुख डा. राकेशकुमार दासले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी अध्यक्षले फोन गरेर ज्यान लिने धम्की दिएको बताएका छन् । अध्यक्षमाथि कारबाहीको माग गर्दासमेत सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएकोले आफू असुरक्षित भएको उनको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा अध्यक्ष खड्कामाथि कारबाहीको लागि ०७५ मंसिर ४ गते नै स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थापन समितिको निर्णयसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, मन्थली नगरपालिका, स्वास्थ्य सेवा विभाग र नेपाल मेडिकल एशोसिएशनमा अनुरोध गरेकोमा हालसम्म पनि कारबाही नभएको उल्लेख छ ।
उनीमाथि कारबाही नभए स्वास्थ्य संस्थाबाट दिइरहेको २४ घण्टे प्रसुति सेवा तथा आकस्मिक सेवाबाहेकका सेवा बन्द गर्ने चेतावनी डा. दासले दिएका छन् ।
गत कात्तिक २० गते प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले लिखु तामाकोसी गाउँपालिका ३ कि ३९ वर्षीया झलमाया श्रेष्ठको शव पोष्टमार्टम गरेपछि अध्यक्ष खड्काले धम्की दिएको डा. दासले बताएका छन् । अध्यक्षले आफूले भनेअनुसार रिपोर्ट नदिएको भन्दै बारम्बार फोनबाट धम्की दिएको उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
गाउँपालिका अध्यक्ष खड्काले भने भने प्रहरी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका चिकित्सकले मिलेमतोमा गलत पोष्टमार्टम रिपोर्ट दिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
मन्थलीमा गरिएको पोष्टमार्टम रिपोर्टमा चित्त नबुझेकै कारण मृतकको पुन पोर्टमाार्टमका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा लास पुर्‍याएको उनले बताए । उनले श्रेष्ठको हत्या भए पनि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले आत्महत्या भनी गलत रिपोर्ट दिएको दावी गरेका छन् ।
झलमाया श्रेष्ठको लास गते कात्तिक १९ गते आफ्नै घरको बुइँगलमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेको थियो ।
धादिङमा अर्काे दुर्घटना: टिपर पल्टिदाँ तिन जनाको ज्यान गयो, चार वर्षीया बालिका सहित तीन जना घाइते
सेती अञ्चल अस्पतालमा औषधि अभाव
स्याङ्जामा प्रहरी जवानद्वारा गोली हानेर आत्महत्या
माइतीपक्षले भन्यो : माधुरीको आत्माहत्या होइन हत्या हो
पशुपतिमा तीजको लहर आयो बरिलै ‍‍‍
मुआब्जा विवादले मेची पुल निर्माण अवरुद्ध
महिलालाई कुटपिट गर्ने सशस्त्र प्रहरीलाई कारबाही गर्न मन्त्रीको निर्देशन